Vaovao - tsenan'ny volom-bovoka PVC: fampidirana
•Ny takelaka vita amin'ny PVC dia misy polyvinyl chloride. Ny vokatra solika, resina ary akora simika tsy voajanahary dia ampiasaina amin'ny famokarana ireo takelaka ireo. Ao amin'ny habaka voafehy, ny rano mihetsika dia manitatra mba hamokarana takelaka vita amin'ny PVC. Io dia manome fahasamihafana isan-karazany amin'ny hatevin'ny foam.
•Ny tombony amin'ny takelaka vita amin'ny PVC dia misy ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny afo, mora ny mamolavola sy ny mandoko ary ny tanjaka sy ny faharetana
•Ireo ravina sombin-javatra ireo dia maivana, voafintina ary mifamatotra mafy amin'ny laminate sy ny vatan. Ireo takelaka ireo dia ampiasaina amin'ny rindrin'ny rindrina, ny fanamboarana fanaka haingo anatiny na ivelany, fizarazarana, tabilao fampirantiana, tabilao fampirantiana, fampisehoana pop-up, fitahirizana, varavarankely, valindrihana diso ary indostrian'ny fananganana.
•Ny takelaka vita amin'ny PVC dia ampiasaina ho solon'ny takelaka hazo hanamboarana varavarana, fanaka, tabilao fanaovana dokambarotra ety ivelany, talantalana, sns.
Mitsangàna amin'ny fangatahana fitaovana maharitra ho an'ny fananganana maharitra sy mora handroahana ny tsenan'ny takelaka vita amin'ny busaam-baravarankely
•Ny tsenan'ny volom-bovoka PVC manerantany dia entin'ny fiakaran'ny fangatahana an'ireo takelaka ireo amin'ny fampiharana isan-karazany, ao anatin'izany ny fananganana, ny fiara ary ny fonosana. Izy io koa dia manolotra fanoherana hafanana sy afo ary fiarovana amin'ny entona, izay mahatonga azy io ho fitaovana tsara ampiasaina amin'ny famokarana valindrihana fiara, fiara fitateram-bahoaka na lamasinina.
•Ny ravin-tsolika PVC dia manohitra ny lozisialy, porofo tsy ampoizina ary tsy misy poizina ho an'ny olona manana fisorohana afo, porofon-setroka ary fiarovana UV. Manome tanjaka sy faharetana tsara koa izy ireo, ary manana fananana mitelina rano simika sy ambany. Noho izany, ny takelaka vita amin'ny PVC dia miasa betsaka amin'ny fananganana sy ny fanamboarana fitaovana, fitaterana ary an-dranomasina.
•Ny fitomboan'ny fangatahana fitaovana fananganana mahomby amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana dia mety hampiroborobo ny fangatahana takelaka vita amin'ny PVC. Ny fitaovana fananganana miorina amin'ny ravina PVC dia manolo fitaovana mahazatra hafa, toy ny hazo, beton, tanimanga ary metaly.
•Mora apetraka ireo vokatra ireo, mahazaka toetr'andro, tsy dia lafo, maivana ary manome tombony maro hafa noho ny fitaovana mahazatra
•Ny fiakaran'ny lalàna amin'ny fampihenana ny fanjifana angovo amin'ny tranobe dia vinavinaina hampiroborobo ny fangatahana takelaka hosoka PVC mandritra ny vanim-potoana mialoha. Ho fanampin'izay, andrasana ny fitomboan'ny isan'ny trano maharitra hitarika ny tsenan'ny busa ao PVC any Asia Pacific.
•Ny vidin-tsolika mora miovaova, ny fihenan'ny toekarena ary ny fitsipiky ny governemanta henjana dia mety hisy fiatraikany amin'ny fitomboan'ny tsena eto an-tany